Matetika ianao no maheno fa tokony hihinana roa ny vehivavy iray. Na izany aza, tsy marina izany. Marina fa mandritra ny fitondrana vohoka dia tokony hanome sakafo ampy ho an'ny olona roa ny vehivavy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, tsy tokony hihinana indroa akory izy, fa avo roa heny. Ny vehivavy dia afaka mieritreritra ny sakafo ara-pahasalamany amin'ny maha-bevohoka azy raha mieritreritra ny fiovan'ny lanjany mandritra ny herinandro maromaro izy. Ny reny amin'ny hoavy dia tokony hiantoka fa ny kilao nangonina nandritra ny fitondrana vohoka dia tsy mihoatra ny fepetra azo atao, satria amin'ny ho avy dia hisy fiantraikany amin'ny zanany izany. Noho izany, manomboka amin'ny herinandro voalohan'ny fitondrana vohoka, ny sakafo mahasalama amin'ny renim-pianakaviana dia tokony ho marim-pototra. Ny fanombantombanana ny zaza sasany ho amin'ny fahazaran-drà, ny diabeta na ny kolesterola avo dia matetika vokatry ny lanjan'ny reniny mandritra ny fitondrana vohoka.
Rehefa misy vehivavy bevohoka manaraka ny fandaharam-pikarakarana sakafo misy kôbhydrate, tavy, proteinina ary be dia be sy legioma dia azo lazaina fa voalanjalanja ny fihinanana azy. Tokony hijanona izany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, ka ny hatsaran'ny sakafo mandritra ny fitondrana vohoka dia tsy mety ny manavaka isan-kerinandro.
Ny hany tokana dia vitamin B9 (asidra folika). Voaporofo fa ampy ny isan'ny asidra folakin'ny vatan'ny renim-piankohonana amin'ny hoavy dia mampihena ny mety ho fisian'ny tsy fahampian-tsakafo ao amin'ny rafi-pitabatabana ao amin'ny embryon, ary manakana ny fisian'ny spindy bifida (kibon-dabozia) ao amin'ny zaza. Ny fikorontanan'ny rafi-pitabatabana ao amin'ny embryon dia mitombo ao anatin'ny 28 andro voalohany amin'ny fitondrana vohoka. Noho izany antony izany, roa volana mialoha ny fikarakarana ary ao anatin'ny 12 herinandro ho an'ny fitondrana vohoka, ny vehivavy dia tokony hampiditra ny vitamin B9 amin'ny sakafo.
Ny asidra folika dia tena goavam-be (ranomamy, mangatsiaka na voankazo), ary koa amin'ny legioma maitso, salady, melons, atody, lentils, vary, voankazo, voankazo ary menaka.
Ny sakafo mahasalama mandritra ny fitondrana vohoka - na mandritra ny herinandro, na ho an'ny andro tsirairay - dia misy fiantraikany amin'ny fahasalamana tsy ny reny hoavy, fa ny fahasalaman'ny embryon ihany koa. Eto ambany eto dia mitanisa teboka vitsivitsy izay hanampy vehivavy iray handamina fandaharan-tsakafo iray mandritra ny fitondrana vohoka:
Omeo lanja ny kalitao - fa tsy be loatra. Ny tanjaky ny angovo avy amin'ny renim-pianakaviana dia miha-mihena kely, noho izany ny sakafo mandritra ny fitondrana vohoka aorian'ny herinandro dia tsy tokony ho lasa kaloraly kokoa. Saingy tsy maintsy mijanona ho manan-karena izy - ireo mikronentrianta sy vitamina.
Amin'ny sakafo, ao anatin'ny volana voalohany sy farany amin'ny maha-bevohoka azy, ny reny amin'ny hoavy dia tokony hanana tolotra telo avy amin'ny vokatra isan-karazany isan'andro. Ny servisy iray dia azo raisina ho 1 kaopy ronono, kapoaka 1 yogourt na 40 grama sigara.
Ny habetsaky ny fibra voajanahary dia fepetra hafa tsy maintsy ilaina amin'ny sakafo mandritra ny fitondrana vohoka. Ny fihinanana legioma tsara eran-tany dia tsy vitan'ny filahianao tsara, fa hanampy anao koa ny tsinainao.
Mihinàna sakafo kely, fa matetika (manodidina ny 2-4 ora). Ny zanakao dia te hihinana na dia tsy mahatsiaro ho noana aza.
Misotroa ranom-boasary, mihinàna sira kely.
Jereo tsara ny fahadiovana ao an-dakozia - na mandritra ny sakafo, ary mandritra ny sakafo. Esory tsara ny voankazo sy ny legioma. Mitondrà hena, trondro, akoho, atody ho amin'ny fahavononana feno. Toy ny tamin'ny herinandro voalohan'ny fitondrana vohoka, ary amin'ny manaraka, ny sakafo amin'ny vehivavy dia tsy tokony hahitana proteinina biby antsasak'adiny. Ampiasao boards ho an'ny fanolorana legioma sy hena. Aza misakafo.
Ao anatin'ny fotoan-tsakafo, na dia ao anatin'ny herinandro faramparan'ny maha-bevohoka aza, dia tokony misy kafeinina kely. Kaopy iray na roa ny kafe malemy isan'andro dia mihoatra noho ny ampy. Aza adino fa ny dite, ny fisotroana Coca-Cola ary ny sôkôla dia misy kafeinina.
Ny alkaola, cheesy malemy, atody, trondro sy trondro voajanaharin'ny ranomasina any avaratra, ny sakafo mandritra ny fitondrana vohoka dia tsy misy afa-tsy ny herinandro manontolo tanteraka.
Hatramin'ny herinandro voalohan'ny fitondrana vohoka ary mandra-pifaranany, tokony ho ao anatin'ny fotoam-pivavahanao ny asidra femina Ω-3 - ilaina amin'ny fandrosoana ara-pahasalamana ny embryon. Mividiana menaka oliva tsara, ary ampio tsy salady ihany, fa ho an'ny sakafo hafa koa.
Ny 20 minitra amin'ny sambokely na haingana dia mandeha 2-3 heny isan-kerinandro dia hanampy anao hiatrika ny olana amin'ny fikorontanana.
Matetika ny vehivavy bevohoka dia atolotra isan'andro - manomboka amin'ny herinandro faha-20 - mba haka tahaka ny fanomanana tafika an-keriny. Ny loharanon-tsakafo tsara dia legioma maitso (toy ny broccoli sy spinach), ary koa ny strawberries, legumes, muesli ary mofo feno. Raha manara-maso ny fihinanana voalanjalanja ny vehivavy, ary ny fitsapana amin'ny rà dia mampiseho fa tsy mijaly amin'ny anemia izy, tsy mila manomana fiofanana. Tsara homarihina fa matetika no antony mahatonga ny fihoaram-pahefana ireo fanafody ireo.
Farafaharatsiny, manondro isika fa ny vehivavy izay mitarika fiainana ara-dalàna dia mila kaleta 1800 hatramin'ny 2100 isan'andro. Amin'ny telo volana voalohany amin'ny maha-bevohoka azy, ny heriny dia mitombo amin'ny kalôria afa-tsy 150 monja. Ao anatin'ny vanim-potoana telo volana fahatelo dia ilaina ny kaloria 300. Ny kalozia toy izany dia azo faritana amin'ny voankazo iray na ravina iray vera.
Mahafinaritra ny milaza amin'ny vadiko momba ny fitondrana vohoka?
Fijerena antsipiriany momba ny trimès voalohany
Ny herinandro fahaketra fitsaboana fahasivy
Mangatsiaka amin'ny herinandro 37 herinandro vohoka
Hexicon tsy manaloka
Roulettes misy tongolo gasy sy tsaramaso
Ny trondron'ny ala - ireo toetra mahasoa sy ny fanoherana
Giardiasis amin'ny ankizy
Vetivety ny manamboatra ronono amin'ny mikraoba iray?
Famotehana - inona no tokony hatao?
Mofomamy ao anaty vilany iray ao amin'ny oven - recipe
Beyoncé dia nitafy sari ary nibanjina tamin'ny lahatsary Coldplay
Volon'ny rindrina volom-borona ho an'ny rindrina
Kitapo misy fasika sandoka
Fivarotana trano fonenana avy amin'ny hazo matevina - fironana moderina
Fiangonana ao St. Nicholas ao Torkia